यसरी मनाउनुहोस् स्वस्थ तिहार « News24 : Premium News Channel
तिहार, बत्तीको चाड । उज्यालोको चाड । सँगसँगै मिठो–मसिनो खानपिन गरिने चाड । साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने र बिहानदेखि साँझसम्म तास खेलेर दिन बिताउने चाड । गाउँघरवरपर देउसी–भैलो खेलेर मनाइने चाड तिहार आइसक्यो । घरआँगन सफासुग्घर राख्नुु, पटाका पड्काउनु र झिलिमिली उज्यालो पार्नु तिहारका विशेषता हुन् । यसबाहेक तिहारमा गुलियो र चिल्ला परिकारहरू प्रशस्त मात्रामा खाने गरिन्छ । कतिपय व्यक्ति वर्षौंपछि भेटघाट भएका साथीभाइसँग तास खेलेर हजारौँ उडाउँछन् । यति मात्रै होइन, रमाइलो गर्ने बहानामा अत्यधिक मात्रामा मदिरा सेवनसमेत गर्छन् उनीहरू, जुन स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । दीपावली एउटा रमाइलो पर्व हो । तर, होस पु¥याइएन भने यसले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनगिन्ती समस्या निम्त्याउँछ । स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी तिहार मनाउने कसरी त ? नयाँ पत्रिकाका रामजी ज्ञवालीले मुटुरोग विशेषज्ञ डा. दीपेश प्रधान र जनरल फिजिसियन डा. नन्दु पाठकसँग स्वस्थ तिहार कसरी मनाउने भनेर प्रश्न सोधेका छन् ।
– तिहार रमाइलो गरी मनाइने चाड हो । तर, तिहारको बहानामा गरिने विभिन्न कार्यले हस्पिटलको वाससमेत हुन सक्छ । एकदमै होसियारी अपनाउनुपर्छ ।
– तिहारमा विशेषगरी मिठाई ज्यादा खाइन्छ । अधिक मात्रामा गुलियो र विभिन्न रङ मिसाइएका मिठाई खानु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले राम्रो मानिदैन । तिहारमा यस्ता खालका मिठाई नखानु बुद्धिमानी हुन्छ ।
– तिहार आयो भन्दैमा आफूले खाइरहेको कुनै औषधि छ भने खान नबिर्सनुहोस् । नियमित खाइरहेका औषधि समयमै खानुपर्छ । नत्र, स्वास्थ्य झन् जोखिममा पर्न सक्छ ।
– बजारमा पाइने कोक, फ्यान्टा, स्प्राइटहरूको कम मात्रामा प्रयोग गर्नुहोस् ।
– मदिराजन्य पदार्थ खानैपरेको खण्डमा दिनको ६० एमएलसम्म लिनुहोस् । तर, बानी नपार्नुहोस् ।
– तिहार भन्नेबित्तिकै गुलियो परिकार खाने आमविश्वास छ । तर, चिल्लो मिसाइएका चकलेट र मिठाईको सट्टा सकभर फलफूल रोज्नुहोस् । यसले स्वास्थ्यमा राम्रो गर्छ ।
– गुलियो, अमिलो खाइसकेपछि प्रशस्त मात्रामा सफा पानी पिउनुहोस् । बिहानदेखि बेलुकासम्म बारम्बार पानी पिउनुहोस् । पानी पिउँदा गुलियो परिकारले शरीरभित्र पार्ने असर घटाउनुका साथै शरीरको विषादीलाई पखालिदिन्छ ।
– बजारमा कृत्रिम गुलियो मिसाइएका परिकार प्रशस्त मात्रामा बेच्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता परिकारबाट सकभर टाढै रहनुहोस् । कृत्रिम गुलियोले क्यान्सरसम्म निम्त्याउँछ । चकलेटमा मिसाइएका अखाद्य र मिसावटयुक्त रसायनले किड्नी र दमको समस्या ल्याउन सक्छ ।
– डायबिटिजबाट पीडित हुनुहुन्छ भने तिहारमा विशेष सावधानी अपनाउनुहोस् । तिहारमा घरैभरि गुलियो परिकार बन्ने गर्छ । गुलियो परिकार सेलरोटी, चिनीरोटी, मिठाई तथा अन्य गुलियो प्रयोग गरिएका खानेकुराले असर गर्न सक्छ ।
– दीपावली मनाउने बहानामा पटाका पड्काउँदा होसियार रहनुहोस् । जुनसुकै वेला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्या निम्तिन सक्छ ।
– मासुजन्य कुरा मात्रै भन्दा पनि सलाद, दहीलगायत खाने गरौँ । मासुजन्य खाद्यपदार्थ खाँदा होसियारी अपनाऔँ ।
– तिहारजस्तो पर्वमा गुलियो मिठाई मात्र खाइँदैन, अत्यधिक मासु, नुनिला र बासनादार खानेकुराहरू पनि खाइन्छ । यी खानेकुरालाई स्वास्थ्यमैत्री बनाउन पकाउने र खाने तरिकामा पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ । सकेसम्म स्वास्थ्यलाई हेरेर खानपिन गर्नुपर्छ । चिल्लो, पिरो, अमिलोको कम मात्रामा प्रयोग गरौँ ।
– तिहारमा मिठाई धेरै खाइन्छ । मिठाईमा कार्बोहाइड्रेट निकै हुन्छ । एउटा मिठाईमा धेरै क्यालोरी हुन्छ । यसले गर्दा मोटोपना, कोलेस्ट्रोल एकदमै बढ्छ । त्यसैले सकेसम्म गुलियो नखाएकै राम्रो हुन्छ । खानैपरेमा स्वादका लागि एकदमै थोरै मिठाई खानुपर्छ ।
– तिहारको वेलामा चिल्लो बढी भएका खानेकुरा खाइन्छ । यस्तो खानपानले कोलेस्ट्रोल बढाउँछ । कोलेस्ट्रोल बढेमा मुटुका रोगहरू जस्तै– हर्टएट्याक, पक्षाघातलगायत हुन सक्छ ।
– खसी–बोका, राँगोको रातो मासु खाँदा युरिक एसिड बढ्न सक्छ । यस्तो भयो भने मिर्गौलादेखि मुटुसम्म असर पर्न सक्छ ।
– सकेसम्म कुखुराको मासु, माछा खाने गरौँ । माछामा ओमेगा थ्री स्याटिएसिड पाइन्छ । यसले कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउन मद्दत गर्नुका साथै हर्टएट्याक हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
– पानीको मात्रा प्रशस्त खानुपर्छ । सकेसम्म धेरै फलफूलको सेवन गरौँ । एकैपटक धेरै गुलियो र धेरै मासु खाने हो भने स्वास्थ्यमा घातक असर गर्न सक्छ ।
राम्रो जीवनशैली अपनाउनुका साथै चाडपर्वको वेलामा बिहान आधादेखि एक घन्टा व्यायाम गर्नु राम्रो हुन्छ ।
तिहारमा रातभरि तास खेल्ने चलन छ । दिनरात तास खेल्दा मानिसमा तनाव उत्पन्न हुन्छ । तनाव उत्पन्न भएसँगै सुगर बढ्ने, प्रेसर बढ्ने हुन सक्छ । सकेसम्म केही समय र रमाइलोका लागि तास खेलौँ, जुवाडे नबनौँ ।
तिहारमा एकदमै जोगिनुपर्ने कुरा भनेको जाँड–रक्सीदेखि हो । जाँड–रक्सीले मुटु र कलेजोमा गम्भीर समस्या थप्न सक्छ । जाँड–रक्सी
खानैपरेमा हार्डड्रिंक्स ३० एमएल र एक गिलास बियरसम्म खान सकिन्छ । नयाँ पत्रिका, काठमाडौं